နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: နှင်းဆီခင်းကို ပျိုးခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ နေရာ (Blog Day အမှတ်တရ)
မသိင်္ဂါရဲ့ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရကို လာဖတ်သွားပါတယ်..း)
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေးကို မှတ်မှတ်ရရ ဖတ်ပါတယ်မသိင်္ဂါ။ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ စာပေအကျိုးပြုနိုင်ပါစေ လို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်။
Happy Blog Day ပါခင်ဗျး) အစအဆုံးဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျ ။
နေရာသစ်မှာ ရတနာပုံ တယ်လီပို့ကို ပထမဦးဆုံး ရောက်သူအနေနဲ့ ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
ခု ဘယ်လိုကွာနေပြီလဲတော့ မသိဘူး၊ ရတနာပုံ တယ်လီပို့က ပရိုက်ဗိတ်ဖြစ်သွားပြီပြောတယ်။
စုံထောက်ဝတ္ထုလေးတွေ အရေးကောင်းလို့ သတိထားခဲ့မိတာ
ကဗျာတွေလည်း ရေးတတ်တော့ အားကျမိပြန်ရော
ခုနောက်ပိုင်း ဘဝသရုပ်ဖော် အိမ်ထောင်ရေးဇာတ်လမ်းလေးတွေလည်း တွေ့ရပြန်တော့ ဘက်စုံတော်တဲ့ သိင်္ဂါကျော်လို့ မှတ်ချက်ချမိပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး စာတွေ ဝတ္ထုတွေ ကဗျာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ ။။
Happy Blog Day ပါ သိင်္ဂါ
ဘလော့တွေအများကြီး သတိတရနဲ့ လိုက်ရေးထားတယ်တော့ ..း))
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဘလော့ဂါဒေး လေးပါ မသိင်္ဂါး)
ဘလော့ဒေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မသိင်္ဂါ ...
ညီမလေး မိုးခါးလိုပဲ ဝါးလို့ အော်သွားပါတယ်...။
မယ်ကိုးကို သတိရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မ။
အသည်းကွဲအက်ဆေးတွေကို လှလှဖွဲ့နွဲ့တတ်သောလို့ ရေးထားတော့ စိတ်ညစ်နေသူတောင် သဘောကျလွန်းလို့ ရယ်မိသွားပါတယ် :D
မရဲ့ ကဗျာအားလုံးလိုလိုကိုလည်း မယ် အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ တကယ်ပါ။
ပျော်ရွှင်စွာ အမြဲစာရေးနိုင်ပါစေလို့း)
မသိင်္ဂါကျော်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိစေတာက စုံထောက်ဝတ္ထုတွေ ရေးတာကြောင့်ပါပဲ။ ဘလော့ဂ်လောကမှာ ဒီလိုင်းမျိုး ဇောက်ချရေးသူကို လက်လှမ်းမီသလောက် မတွေ့ဖူးသေးတော့ စာအစုံဖတ်ချင်တဲ့ (ကိုယ်အပါအဝင်) ပြင်ပစာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်မိသေးတယ်။
နောက်ထပ် စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်းလေးတွေ ရေးပါအုံး။ စောင့်ဖတ်နေတာကိုလည်း အသိပေးပါရစေ။
တကယ်တော့ကြည်နူးစရာပါပဲနော်။
နဲ့ဖတ်စရာဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဖတ်မဲ့ သူတွေက
ကျနော်ကတော့ လူမသိ သူမသိ လုပ်ပြီး ဘလောက စာတွေကို ပြောင်းနေတဲ့ ကျနော့် ဘလော့စပေါ့ကို စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက် ပထမဆုံး ရောက်လာတဲ့ သူကို အမြဲတမ်း သတိရနေမှာပါပဲ။ ရှားရှားပါးပါး စာတွေကို ဘာသာပြန်တတ်မှု နဲ့ စုံထောက် ဝတ္ထုတွဲတွေကြောင့် တကယ်ကို မှတ်မှတ်ရရ လာဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ပါပဲ။ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း ရေးနိုင်ပါစေဗျာ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘလော့ဂ်ဒေးပါ သိင်္ဂီရေ။ မိန်းကလေးဆန်ဆန်မနေတတ်တာ အန်တီနဲ့တူလို့ သိင်္ဂီကိုအမြဲမှတ်မိနေပါတယ်ကွယ်း))
ဟက်ပီးဘလော့ဂ်ဒေးပါ မသိင်္ဂါရေ..။ စာတွေအများကြီးဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေရှင်။ အစ်မကဗျာတွေကို ကြိုက်မိလို့ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်း)
့Happy blog day ပါအမရေ..
ဟက်ပီးဘလော့ဒေးပါ အမရေ . . စက်ရက်တယ် စက်ရက်တယ် ကိုယ့်အမတို့ စက်ရက်ပုံများ ရက်စက်ပါဗေ့ဗျာ . . ကျွန်တော် နာမည် ဗညားရှိန်ပါ ခင်ဗျာ ( ဇာတ်မင်းသားဖိုးချစ် အသံလေးနဲ့း) . . ဗညားရှိန်ပါ . .ဗညာါးရှိန်းး မဟုတ်ရကြောင်းပါဗျာ . . .း))
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
မသိင်္ဂါကျော်ေ၇.. ဘလော့ခ်ဒေးလေးတောင် လွန်သွားပြီ.. ခုမှ လာဖြစ်တယ်..း)).. ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ...
တဲ့ဘလောဂ့်ဂါ မပီသတဲ့ ဘလောဂ့်ဂါတဲ့
ကျွန်တော်တစ်ယောက် လိုင်းပေါ်က ဒီလောက်ကြာာပျောက်နေတာ တောင် သတိတရ ထည့်ရေးတဲ့ မသိင်္ဂါကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.. အမကို စသိခါစက ကိုသိင်္ဂါရ နဲ့မှားပြီး ကိုသိင်္ဂါကျော် လို့ ခေါ်မိတာကို အမှတ်ရမိသေးဗျာ...
ဟက်ပီး ဘီလိတ်တဒ် ဘလော့ဒေးပါနော်။
(သိပ်နောက်မကျရှာဘူးနော်။ ဟီး ဟီး။ အမတွေ လာနေတာနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေပြီး ဘလော့မလည်ဖြစ်တာ။ )
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စာပေအနုပညာနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။
ဘလော့ဂ်ဒေးပို့စ်လေး အခုမှ လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဟင်... ရို့စ် နာမည်လည်း မပါဘူး။ မခင်လို့ ထင်တယ်နော် ခိခိး)) နောက်တာပါ။